Suuragal Ma Tahay In Lagu Shubto Doorashada Mareykanka? | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Suuragal Ma Tahay In Lagu Shubto Doorashada Mareykanka?
Musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku andacoonayaa in Isdabamarin dhanka codadka ah ay ka jirto dalka Mareykanka. Balse, suuragal ma tahay in lagu shubto doorashada Mareykanka? Kooxda u ololeyneysa Donald Trump waxa ay sheegayaan in “doorashada la xadayay” muddo bilooyin ah, waxayna eedeynayaan warbaahinta oo ay ku sheegeen daacad darro iyo aaminaad xumo. Sidoo kale saxaafadda ayey ku tilmaameen inay garab siinayaan Hillary Clinton, si xisbiga Jamhuuriga looga adkaado doorashada.
Laakiin hadda hadalkaasi wuxuu gaadhay meeshii ugu sarreysay. Donald Trump ayaa waxa uu billaabay dood dhanka Twitter-ka ah oo uu ku xoojinaayo eedaha uu soo jeedinayo. Dooda Mr Trump ee ah in “Doorashada lagu shubanayo” waa eeddii ugu halista badneyd ee uu Trump usoo jeediyo. Kaligii kuma eko dareenkaasi. Taageerayaasha Jamhuuriga, seddax meelood meel oo kali ah ayaa aaminsan in doorashada ay tahay mid xaq ah, sida ay xustay wakaaladda wararka ee AP.
Si kastaba, cilmi baadhis la sameeyay ayaa waxa ay muujineysaa in dalka Mareykanka aanan si weyn looga aqoon in codadka doorashada la xado. Sanadkii 2014, Justin Levitt, oo ah xirfadle ka tirsan iskuulka sharciga ee Loyola, waxa uu helay 31 kiis oo la xidhiidha isdaba marin codad oo ku saabsanaa hal bilyan oo codad doorashooyin dhacay intii u dhexeysay 2000 illaa 2014-kii. Fikradda ah in doorashada Mareykanka lagu shubto ma ahan mid “qalafsan”, “mana loo xadi kara qaabka uu Trump sheegayo,” sidaasi waxaa sheegay Richard Hasen oo ah khabiir ku takhasusay sharciga doorashada.
“Ma suuragali karto in kumannaan qof ay 5, ama 15 jeer codeeyaan, iyagoo aanan la qaban,” ayuu yidhi Prof. Richard. Saraakiisha doorashada ee dalka Mareykanka awoodoodu waa mid baahsan. Gobol kastaa wuxuu qabaa shuruucdiisa u gaarka ah, waxaana kor meeraya shaqaalaha guddiga doorashada.
Gobolka Philadelphia ayaa sanadkii 2012-kii baadhitaan lagu sameeyay ka dib markii musharrixii madaxtinnimo ee Jamhuuriga Mitt Romney uu hal cod xittaa ka heli waayay 59 xarumood oo magaalada ku yaalla.
Xisbiga Jamhuuriga ayaa arrintaasi baaritaan ka dib ku qancay in wax isdaba marin aysan dhicin.
Hadaba, hadda ma dhici kartaa in doorashada la xado?
Arrinta muhiimka ah ee ku jirta hadalka ololaha Trump uu soo jeedayay ee ku saabsan ku shubashada ayaa waxa ay tahay inay jiri karto in dad ay codeeyaan marar badan maalinta doorashada, taas oo cilmi baadhista ay muujineyso inay ka mid tahay isdaba marinta ugu yar, sida uu qabo Prof. Mayer
Waxa uu sheegay in musuqa ugu badan ee doorashada ay sameeyaan saraakiisha doorashada. Waxaa dhici karta inay u xadaan hab la xidhiidha sanduuqyada codeynta ama codad la waayay iyo codbixiyayaasha maqan.
Laakiin isdaba marinta noocaas ah ayaa sii yaraaneysa, sababtoo ah laamaha cadaaladda ayaa si fudud ula dagaallama, ayuu hadalkiisa ku sii daray.